Isishwankathelo seDlalo elide kakhulu likaShakespeare, "iHamlet"
I-'Hamlet 'Isishwankathelo: Yintoni eyenzekayo kwi "Hamlet"?
Umsebenzi owaziwayo kaWilliam Shakespeare, uHamlet, iNkosana yaseDenmark , yintlekele eyenziwa kwiintlanu izenzo kwaye yabhalwa malunga ne-1600. Ngaphandle kweyomdlalo wokuziphindezela, i- Hamlet ijongana nemibuzo malunga nobomi kunye nobukho, ukungcola, uthando, ukufa nokungcatshiswa. Ngomnye wemisebenzi ecatshulwe kakhulu kwiincwadi zehlabathi, kwaye ukususela ngo-1960, iguqulelwe kwiilwimi ezingama-75, kuquka iKlingon.
Isenzo Siqala IWworldworld
Ekuqaleni, iHamlet, iNkosana yaseDenmark, ihanjelwe ngumoya ongaqondakali ofana noyise osekudala, ukosi.
Umoya uxelela uHamlet ukuba uyise wabulawa nguKlawudiyo, umntakwabo, owathi wathatha itrone waza watshata nonina kaHamlet, uGertrude. Umoya ukhuthaza uHamlet ukuba abuyisele ukufa kukayise ngokubulala uKlawudiyo.
Umsebenzi ngaphambi kokuba uHamlet anzima kakhulu kuye. Ngaba bubi ububi, uzama ukumlinga ukuba enze into eya kuthumela umphefumlo wakhe esihogweni ngonaphakade? Imibuzo ye-Hamlet ingaba i-specter iyakukholelwa. Ukungaqiniseki kweHamlet, ukukhathazeka, kunye nentlungu yinto eyenza ukuba lo mlingiswa ukholelwe-ngokuqinisekileyo nguye unobumba obuninzi beengxaki zeengqondo. Uphuza ukuthabatha isenzo, kodwa xa esenza ngokukhawuleza nobudlova. Singazibona kule ndawo "edumile" xa uHamlet ebulala uPolonius .
Intombi kaPolonius , u- Ophelia, uthanda uHamlet, kodwa ubudlelwane babo buye lwaphuka ngenxa yokuba uHamlet afunde ngokufa kukayise. U-Ophelia ufundiswa nguPolonius kunye neLaertes ukuba bahlasele intuthuko yamaHamati.
Ekugqibeleni, u-Ophelia uyazibulala ngenxa yokuziphatha kukaHamlet kuye kunye nokufa kukayise.
Ukudlala ngaphakathi ngaphakathi
Ngomthetho wesi-3, isiqendu 2 , i-Hamlet iququzelela abadlali ukuba baphinde babone ukubulawa kukayise ezandleni zikaKlawudiyo ukuze baqonde indlela uKlaudius ayabela ngayo. Udibana nonina ngokubulala kwakhe uyise kunye nokuva umntu emva kwe-arras-ekholelwa ukuba nguClaudius, uHamlet ugwaza indoda yakhe ngekrele.
Iphelelwa ukuba ibulale uPolonius.
Rosencrantz kunye neGuildenstern
UClaudius uyaqaphela ukuba uHamlet uphume ukumfumana kwaye uthi u-Hamlet uhlase. UClaudius ulungiselela ukuba uHamlet athunyelwe eNgilani kunye nabahlobo bakhe bokuqala uRosencrantz noGuildenstern, oye wazisa ukumkani ngesimo sengqondo sikaHamati.
UClaudius uye wabhalela ngokufihlakele ukuba uHamlet abulawe xa efika eNgilani, kodwa uHamlet uphumelela emkhombeni aze atshintshe umyalelo wokufa kwakhe ngencwadi eyalela ukufa kukaRosencrantz noGuildenstern.
"Ndibenjalo okanye hayi …"
I-Hamlet ibuyela eDenmark njengoko u-Ophelia engcwatywa, oku kumenza ukuba acinge ngobomi, ukufa, kunye nobuthathaka bomntu. Ukusebenza kwesi sililo kuyinxalenye enkulu yendlela nawuphi na umdlali obonisa i-Hamlet ugwetywa ngabagxeki.
Laertes ubuya eFrance ukuba abuyisele ekufeni kukaPolonius, uyise. UClaudius wenza icebo lokubulala ukufa kukaHamlet kwaye umkhuthaza ukuba athambise ikrele lakhe ngetyhefu-ukubeka indebe yetyhefu eceleni kwimeko yokuba ikrele lingaphumeleli.
Kwizenzo, iinkemba zitshintshwe kwaye iLaert ixhatshazwe ngokufa nekrele elityhefu emva kokubetha iHamlet.
Uxolela uHamlet ngaphambi kokuba afe.
UGertrude uyafa ngokukhawuleza ukusela indebe yetyhefu. U-Hamlet ugwaza uKlawudiyo kwaye ummisela ukuba atye yonke isiselo esinxilisayo. Ukuphindisela kweHamati ekugqibeleni kugqibe. Ngethuba lokufa kwakhe, ubeka isihlalo sobukhosi ku-Fortinbras aze avimbele ukuzibulala ngoHoratio ngokumcela ukuba ahlale ephila ukuze athethe le ngxelo.
Iago Evela kwi-'Othello 'Uhlalutyo lwaBantu
Desdemona kunye neOthello
'Othello': uCassio noRoderigo
10 Shakespeare Quotes kwiNkathazo
Izihloko Eziphambili Zitholakala kuWilliam Shakespeare 'Othello'
I-Othello yeShakespeare: Uhlalutyo lwezakhono
'INkosi yaseLear': UMthetho 4 Umxholo 6 no-7 Uhlalutyo
Umxholo weNgqungquthela 'eRomeo noJuliet'
Ephezulu 6 "ULear Lear" Izihloko: Shakespeare
'Othello' UMthetho 5, Isiqendu 2 - i-Analaysis
UCzar Nicholas II
Biography kaHumphry Davy
Ukuqonda Imibuzo yovavanyo lwezinto
UkuPhathwa kweMouse ePhambili
I-Hydrogen Fuel Cells
I-Lewis & Clark College Admissions
Inkcazo ye "Llano Estacado" e-US nakwihlabathi jikelele
UOtto Wagner eVienna
Ngaba Ndifanele Ndifumane I-Degree Estate Estate?
Umlando weDelphi - ukusuka ePascal ukuya kwi-Embarcadero Delphi XE 2
Ukuguqulwa kweMelika: iMfazwe yeFlamborough iNtloko
Ukwabelana ngeNgeniso kunye neNyakatho yeMidlalo yeMidlalo yeMidlalo yeMidlalo eNorth America
I-RAMOS Igama lomnini igama kunye nomvelaphi
I-Nok Art: Pottery yasekuqaleni yaseAfrika
I-US ne-Middle East Ukususela ngo-1945 ukuya ku-2008
Amandla e-illocutionary (intetho)
Ukudibanisa isenzi esingaqhelekanga sesiFrentshi ukuba ube ngumntu (ukuba abe)
Izinto ezichaphazela ukubonakala xa iScuba Diving
Yintoni Ubuninzi be-Octopus?
Uhlobo lweMveliso yeRhafu